स्पेनी trainers कठिन समयमा मार्फत जाँदैछन्। हो, हामी Hosepa Gvardioly र सफलता देख्न सक्नुहुन्छ Luisa Enrike को "Bavaria" र "बार्सिलोना", क्रमशः, तर अन्य शीर्ष क्लब डच, फ्रेन्च र इटालियन विशेषज्ञहरु रंगरुट गर्न रुचाउँदैनन्। श्रम मुद्रा मा कोचिंग गर्दा सूर्य अन्तर्गत ठाउँ खोजिरहेको जो बीच बाहिर खडा Juande Ramos, जीवनी र क्यारियर CSKA संग भाग मा कम से कम परिचित रूसी प्रशंसक छ, Spaniards दर्जनौँ अनुभव। शीर्षक र क्लबहरू कोचिंग इतिहास, को पाठ्यक्रम यसको धनी, अधिक विस्तृत कुरा हो।
गाउँमा एक खेलाडी मूल रूपमा, स्पेन केन्द्र नजिक छ पेड्रो मुनोज, मा आफूलाई देखाउन विश्वव्यापी गर्न असमर्थ। Juande पहिलो क्लब भएको liga तालिकाको बीचमा जित्न गर्ने प्रयास जो "एल्चे", थियो। जवान खेलाडी एकदम राम्रो सुरुमा आफूलाई देखाए, तर त्यसपछि त्यहाँ घाइते (सबैभन्दा प्रभावित गोडा) गिरावट थिए। 1977 मा, "एल्चे" क्लब छाड्ने मिडफिल्डर सोधे, र Juande को परिणाम जसको जीवनी तल्लो डिभिजनका5वर्ष छ, जस्तै स्पेनिश फुटबल को, अन्तमा 1982 मा निर्णय भएको टाढा सबैभन्दा सफल फुटबल क्यारियर पूरा गर्नको लागि। र उचित त।
बाटो कोचिंग सुरु
यस पुस्तिका Juande लिए जो पहिलो क्लब, पहिलो व्यावसायिक क्लब एक विशेषज्ञ को कर्ण छ जो Ramos-खेलाडी "एल्चे", 36 वर्ष को उमेर मा उभिए भयो। केही होइन, तर प्रगति स्पेनको एक "सीडी LOGROÑÉS" Juande को Segunda मा दोस्रो स्थानमा लिएर, उदाहरण मिल्यो गर्दा, 1995/1996 मौसम मा कोच आए।
सुन पदक सेकेन्ड संग तर, उदाहरण मा उत्पादन - दोस्रो यस्तो सफलता आए Ramos गर्न जो संग "Rayo Vallecano" - क्लब सफलता कोच तिनीहरूलाई नेतृत्व जो सम्झौता नवीकरण गर्न, र "बार्सिलोना द्वितीय" फाइदा लिन, र पछि फिट देखेको छैन। 16 लक्ष्य (सिकार - - यो 2000/2001 सिजन मा, "Rayo", फिफा उचित प्ले प्रणाली धन्यवाद, क्वार्टरफाइनलमा पुगेको र यूईएफए क्लब प्रतियोगिता मा एक ड्रप-बाहिर (च्याम्पियन्स लिग र यूईएफए कप) सबैभन्दा लक्ष्य लागि रेकर्ड सेट जो यूईएफए कप, एउटा टिकट पायो " Konstel-laso Esportivo d'Andorra ")।
को कोच को प्रयास unnoticed भएन, र "रियल Betis", "स्पेनीस" र "मैलेंगा" मार्फत पारित, त्यो "ओस्लो" मा मुख्य को पोस्ट, जहाँ विशेषज्ञ बोलाएर आफ्नो पूर्ण क्षमता देखाए थियो। Ramos दुई पल्ट यूईएफए कप जित्यो nerviontsy को नेतृत्व अन्तर्गत, एकचोटि जीत व्यवस्थित गर्ने यूईएफए सुपर कप, साथै जितेको र स्पेनिश सुपर कप। यो Spaniard सबैभन्दा लोकप्रिय फुटबल कोच को एक बनाएको छ।
त्यहाँ स्पेन देखि र इटाली र जर्मनी ले धेरै प्रस्ताव गरिएको छ, तर Juande Ramos उहाँले लन्डन "Tottenham" लाग्यौं जहाँ अंग्रेजी प्रिमियर लिग, आफ्नो हात प्रयास गर्ने निर्णय गरे। कदम संग टीम को नयाँ कोच को जीत व्यवस्थित फुटबल लिग कप। तर, यो Ramos ब्रिटिश द्वीपहरु भन्दा विजेता मा।
यो एक ठूलो र शक्तिशाली "रियल मैड्रिड" स्पेनको विशेषज्ञ निम्न क्लब बन्नेछ। Juande "रियल" को व्यवस्थापन ध्यान भन्दा ला liga मा दोस्रो स्थानमा भन्दा शाही क्लब मा थप केहि पनि हासिल गर्न सकेन।
को खण्ड "Tottenham" र मैड्रिड "रियल" मा एक अपेक्षाकृत असफल क्यारियर पछि Juande Ramos जहाँ आफ्नो पहिलो स्टप थियो CSKA मास्को पूर्वी युरोप, गए। यो कोच र सबै भन्दा राम्रो समय रूसी टीम साधारण जमीन फेला पार्न र एक प्रमुख सफलता आउन पर्छ भनेर देखिन्छ थियो। तर त्यहाँ थियो। हाम्रो क्लब मा Spaniard एक पटक गलत भयो। विशेषज्ञ आफ्नो खेल योजना अन्तर्गत CSKA खेलाडीहरू समायोजन र यसको लागि धेरै खेलाडीहरू खरिद गर्न एव्जेनी ईबीएस (क्लब अध्यक्ष) सोधे सकेन। Lennorych disagreed र सम्पर्क आपसी सहमति गरेर समाप्त भयो।
अर्को (अझै दुःखको कुरा, अन्तिम) क्लब Spaniard Dnepropetrovsk "Dnepr" थियो। युक्रेनको च्याम्पियन्स लिगमा उत्पादन को च्याम्पियनशिप मा दोस्रो स्थानमा - सबै टोली पहिलो पटक इतिहास मा, Ramos मिल्यो धन्यवाद। फेरि एक पटक, यो सबै राम्रो थियो देखिन्थ्यो। तर देशमा राजनीतिक संकट जीवनको सबै पक्षमा असर गरेको छ। Juande "Dnepr" बायाँ र त्यसपछि अझै पनि चलिरहेको छ जो यस युक्रेनी पक्ष को ऋण को उहाँलाई, भुक्तान एउटा महाकाव्य थाले।
निस्सन्देह, यो विशेषज्ञहरु प्रतिबिम्बित गरिएको छ। पहिले यो केवल युरोपेली फुटबल पाउन सकिन्छ जो सबैभन्दा शान्त र unassuming कोच, Juande Ramos छ कि लाग्यो थियो। समाचार, अन्तरवार्ता, फोटो - यो सबै उहाँको बारेमा छैन। तर मालिक "Dnepr" यस्तो लज्जाजनक व्यवहार, को विवादास्पद व्यापारी Kolomoisky पनि एउटा ढुङ्गा कुरा गर्न गर्नेछ। को युक्रेनी टोली अध्यक्ष उहाँले डर छैन युरोपेली क्लब बाट योग्य ठहरिन रूपमा Spaniard केही र प्रतिबंध भुक्तानी गर्नेछ भन्नुभयो। सामान्य मा, यो धेरै अप्रिय र जटिल कथा छ।
Ramos कहाँ हुनेछ?
हाल को वर्ष को समस्या भए तापनि Juande सबैभन्दा खोजे-पछि युरोपेली फुटबल मा विशेषज्ञहरु को एक रहिरहन्छ। अफवाहहरु Ramos rife जान्छ जो। "रियल Sociedad", "Trabzonspor" र पनि एक अस्थायी "चेल्सी" कोच को पोस्ट पेसा कोच जारी लागि सम्भव विकल्पहरू बीच पाउन सकिन्छ।
तर, सबै भन्दा व्यावहारिक पूर्वानुमान Juande Ramos नेतृत्व सक्ने "भ्यालेन्सिया" छ। पाठ्यक्रम, परिचित र निरन्तर त्यहाँ आफ्नो औंलाहरुमा नेताहरूले मा राखिन्छ जो क्लब, संग अनुभव को स्पेनी फुटबल विशेषज्ञ, साथ। जहाँ स्पेनिश कोच कल्पना गर्न, तर आशा हामीले चाँडै नयाँ Juande विजय देख्ने मात्र गरौं साँच्चै कठिन छ पाउनेछौं।
कोस्टा Rican रक्षक Dzhankarlo Gonsales
Kurnik Puff केक
चामल र उहाँको बारेमा रोचक तथ्य को ताप सामग्री।
होटल Noria Resort4* (मिश्र / Sharm एल शेख): तस्बिर, वर्णन र समीक्षा
बच्चा मा पोपको को जलन। के गर्ने?
टाइल टाँसन (को nuances प्रयोग)
को crests मा प्याज खेती को चिनियाँ तरिका: प्रविधिको विवरण, सन्तानको तयारी